မြို့အုပ်မင်း – Ye Htut's Blog
Posted byye htut January 15, 2022 Posted inEconomy, EssayTags:yehtutarticle
အခု အချိန်မှာတော့ “ အိမ်အတွက် ဘာပဲလိုလို ကျွန်တော့်ကို ခိုင်းပါ” ဆိုပြီး တောင်းဆိုနေရ တယ်။ အဓိက ကတော့ အပြင်ထွက်ဖို့ အတွက် ခေါင်းစဉ်ရှာတာပါပဲ။ ကျွန်တော်ကလည်း ခရီး သွားရင် သွားရ၊ မသွားရရင် မြို့လုံးပတ်လည် လှည့်ချင်နေတာကိုး။ ဒါပေမယ့် အိမ်သူ က လည်း တောင်ပေါ် မြေပြန့်မခွဲခြားဘဲ အုန်းအုန်းထ ဝုန်းဒိုင်းကြဲနေတဲ့ အခုလို အချိန်မှာ ဘယ်မှ မသွားစေချင် ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဘာပဲလိုလို ငါသွားဝယ်မယ် ဆိုပြီး တောင်းဆိုရတော့တာပဲ။
အခုလည်း အသီးအရွက်နဲ့ ဟင်းချက်စရာတစ်ချို့လိုတယ်လို့ အသံကြားတာနဲ့ ၊ “ကားဆီ ထည့် ဖို့လည်းရှိတယ်၊ ငါသွားလိုက်မယ်ဟေ့” ဆိုပြီး တစ်ချိုးတည်း လစ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ပထမဆုံး ဈေးဝယ်ဖို့ စီးတီးမတ်ကို သွားတယ်။ အနားက ဈေးမှာ ဝယ်ရင်လည်း ရတယ် ။ဒါပေမယ့် စီးတီး မတ်မှာက ဘဏ်ကပ်နဲ့ရှင်းလို့ရတော့ ပိုအဆင်ပြေတယ်။
စီးတီးမတ်ရှိတဲ့ဈေးဝယ်စင်တာရှေ့က အသုပ်ဆိုင်လေးကတော့ လူစည်နေပြီ။ အရင်က ဒီဆိုင် လေးဟာ မနက် ၇ နာရီလောက်ကနေ မွန်းလွဲ တစ်နာရီ နှစ်နာရီ အထိပဲရောင်းတာ အခုတော့ ညနေ ငါးနာရီလောက်အထိ ရောင်းနေရတယ်။ ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းအမယ်ကလည်း အသုပ်စုံ ကနေ ညနေဘက်ဆိုရင် လက်ဖက်ထမင်း၊ ငါးခြောက်သုပ်၊ ဆေးဘဲဥသုပ်အထိ ဖြစ်လာပြီ။
ဈေးဝယ်စင်တာမှာ ရှိတဲ့ ဆိုင်ခန်းတွေက ဝန်ထမ်းတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ရုံးတွေ က ဝန်ထမ်းတွေက ကုန်ဈေးနှုန်းက တက်၊ မီးက ပျက် တဲ့ အချိန်မှာ ထမင်းမချက်တော့ဘူး။ ဒီဆိုင် လေးမှာ အသုပ်စုံ၊ ဒါမှမဟုတ် ရခိုင်သုပ်တစ်ပွဲ ခြောက်ရာ ၊ ထမင်းဖြူတစ်ပွဲ နှစ်ရာ နဲ့ ကိစ္စပြီး လိုက်ကြတယ်။ ရုံးအဆင်း အိမ်အပြန် ညစာ ဝယ်သွားကြတယ်။ အဟာရတန်ဖိုးတော့ ထည့်မတွက်နဲ့ပေါ့။ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေကတော့ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ရင် အဟာရတန်ဖိုးကို မေ့ထားလိုက်ကြတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ အသုပ်ဆိုင်လေးက ထုံထိုင်းမှုန်မှိုင်းနေတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး ကဏ္ဍ ထဲမှာ ရှားရှားပါးပါး တိုးတက်မှုရှိနေတဲ့ လုပ်ငန်း ဖြစ်လာတော့တာပဲ။
၂၀၁၆ ဧပြီ၊ မေ လမှာ မီးခဏခဏပျက်တော့ အင်န်အယ်လ်ဒီအစိုးရကို ကလိခဲ့ဖူးတဲ့ ကျွန်တော် ဟာ မီးပျက်တာအနည်းဆုံးလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ ၂၀၁၉ ၊ ၂၀၂၀ ကာလရောက်တော့ ပြန်ပြီး အားနာခဲ့ ဖူးတယ်။ အခုတော့ လ ျှပ်စစ်မီးအခြေအနေက ရန်ကုန်မြို့ကို A, B , C , D အုပ်စုတွေ ခွဲပြီး မီးပေးခဲ့ရဖူးတဲ့၊ အစိုးရ ရုံးတွေမှာ ရုံးဆင်းရင် မီးပိတ်ဖို့ စာတွေချိတ်ပြီး သတိပေးရ၊ မီးသုံးစွဲ မှု စနစ်တကျရှိမရှိ အဖွဲ့နဲ့လိုက်စစ်ရတဲ့ ၂၀၀၀ ပြည့်လွန် ကာလတွေကို ပြန်ရောက်တော့မယ့် ကိန်းဆိုက်နေပြီ။ ကျောက်ခေတ်လူသားတွေ မီးတန်ဖိုးကို သိသလို ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သား ဟာ လည်း လ ျှပ်စစ်မီး တန်ဖိုးကို ကောင်းကောင်းသိနေပြီလေ။
ဈေးဝယ်စင်တာထဲ သွားတော့ အင်္ဂလိပ်နာမည် ရှည်ရှည်လျားလျားနဲ့ ကော်ဖီဆိုင် လေးထဲက ပစ္စည်းတွေ သယ်ထုတ်နေတာ တွေ့တယ်။ ဒီဆိုင်လေးရဲ့ တံခါးတွေ ပိတ်နေတာ တစ်နှစ်နီး ပါး ရှိ ပါပြီ။ ဈေးနည်းနည်းကြီးပေမယ့် ဝိုင်ဖိုင်လေးသုံးပြီး စတိုင်ကျကျ ထိုင်လို့ရတဲ့ ဒီဆိုင်လေး ပြန်ဖွင့် မလားလို့ မေ ျှာ်လင့်နေခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ဝန်ထမ်းလေးတွေ မျက်စိမျက်နှာပျက်ပျက် နဲ့ ပစ္စည်း တွေ သိမ်းနေကြပြီ။ ဒီဈေးဝယ်စင်တာထဲမှာ ပိတ်ထားတဲ့ တံခါးတစ်ချပ်တိုးပြန်ပြီပေါ့။ တစ်ချို့ ပိတ်ထားတဲ့ ဆိုင်ခန်းတွေရှေ့မှာတော့ “မကြာမီ လာမည် မေ ျှာ်” ဆိုတဲ့ ဗီနိုင်းပိုစတာ ကြီး တွေ ကပ်ထားတယ်။ “ဘာတွေလာမှာလဲ” ၊ “ ဘယ်တော့လာမှာလဲ” ဆိုတာတော့ တိတိကျကျ မပြောထားဘူး။ ဆပ်ပြာပူဖောင်း ကတိတွေများလာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲက နောက်ထပ် ပူဖောင်း တွေပေါ့။ လူတွေလည်း ဆပ်ပြာပူဖောင်းတွေကို လိုက်ဖမ်းနေတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ တူလာပြီ။
ဒီဈေးဝယ်စင်တာမှာ ဘဏ်သုံးခုက အေတီအမ် ငွေထုတ်စက် သုံးလုံးရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါး လ လောက်အထိ ဒီစက်တွေရှေ့မှာ လူတန်းရှည်ကြီးတွေ မြင်ခဲ့ရဖူးတယ်။ လက်ဖျံတွေမှာ တန်းစီ ဇယားဂဏန်းတွေနဲ့လူတွေ ၊ မွန်းကျပ်ပြီး ဘာကိုမှ သည်းမခံချင်တော့တဲ့ မျက်နှာနဲ့ ငွေတကယ် ထုတ် မယ့် သူတွေ၊ ကလေးတွေပါခေါ်လာ၊ ကလေးတွေက ဈေးဝယ်စင်တာထဲမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး
လေ ျှာက်သွားနေတဲ့ တန်းစီတိုးစားသူတွေ၊ သူတို့အားလုံးကြားက ဘဝဇာတ်လမ်းအစုံစုံကို မြင်ရတဲ့ အချိန် ပေါ့။
အခုတော့ ဒီလူတန်းရှည်ကြီးမတွေ့တော့ဘူး။ ဒါဟာ ဘဏ်စနစ်ကြီး အဆင်ပြေချောမွေ့သွားလို့ မဟုတ်ဘူး။ ရာခိုင်နှုန်းတဲ့ ငွေလဲပေးတဲ့၊ ဘဏ်ထဲက ကိုယ့်ငွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ပြန်ဝယ်ရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားလို့ အေတီအမ်စက်တွေရှေ့မှာ လူမရှိတော့တာ။ ဒီဈေးဝယ်စင်တာက အေတီအမ်စက်တွေကို ငွေလာမဖြည့်တာလည်း ကြာပေါ့။ ဘာတံဆိပ်ရ၊ ဘာဆုရ ဆိုပြီး ရေးထားတဲ့ အေတီအမ်စက်ဆိုရင် ဘဏ်ကတောင် ပြန်လာဖြုတ်သွားပြီ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ မော်ကွန်း မဂ္ဂဇင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဗဟို ဘဏ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသော်က တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၆၀% ပြန်ဖွင့်နိုင်ပြီ လို့ ပြောတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဘဏ်တွေမှာ လူတစ်ဦးကို တစ်ပတ် သိန်း နှစ်ဆယ်၊ ကုမ္ဗဏီနဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေအတွက် တစ်ပတ် သိန်းနှစ်ရာ ထုတ်ပေးဖို့ ဗဟိုဘဏ်က သတ်မှတ်ထားကြောင်း သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။
ဗဟိုဘဏ် ဒုဥက္ကဋ္ဌကြီးဟာ တိုကင်ရဖို့ဆိုတာ လူ့ပြည်က အပ်တစ်စင်းနဲ့ နတ်ပြည်က အပ်တစ်စင်း ထိဖို့ ထက်ပိုခက်တဲ့အကြောင်း၊ တိုကင်ရရင်တောင် သိန်းနှစ်ဆယ် မဆိုထားနဲ့ ငါးသိန်းရရင် ထီ သိန်းငါးထောင်ဆုပေါက်သလို ကံထူးသူဖြစ်ကြောင်း၊ ဘဏ်ဝန်ထမ်းက ပြုံးပြီး ကြို တဲ့ ခေတ်ကနေ ကိုယ်က ဘဏ်ဝန်ထမ်းကို ပြုံးပြရတဲ့ခေတ်ကို ရောက်နေကြောင်း၊ ဘဏ်ထဲ မဝင်ခင် လုံခြုံရေးကို တိုကင်ရသူဖြစ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ငွေထုတ်တာမဟုတ်ဘဲ အခြား ဝန်ဆောင်မှု လာလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းပို့နေရကြောင်း သိပုံမရဘူး။
ဈေးဝယ်စင်တာထဲ အပေါ်တက်၊ အောက်ဆင်း လေ ျှာက်သွား၊ စီးတီးမတ်မှာ ဈေးဝယ်ပြီး တော့ ဆီထည့်ဖို့သွားတယ်။ ဆီဆိုင်ရှေ့က ဈေးနှုန်းဆိုင်းဘုတ်ကြီးကို မကြည့်ဘူး။ မျက်လွှာချပြီး ဖြတ် ခဲ့တယ်။ ဘာမှ တွက်ချက်မနေတော့ဘူး။ သုံးသောင်းဖိုးထည့်လို့ပြောလိုက်တယ်။ တိုင်ကီထဲ ရောက်သမ ျှ ကိုယ့်အတွက်ပေါ့။ ဈေးတက်လို့လည်း အပြစ်မတင်တော့ပါဘူး။ ဘဏ်ကပ် နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘာ Pay ညာ Pay နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပေးလို့ရတာပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆိုင် ကထွက်တော့ ဆီဂိတ်ကို ကြည့်လိုက်တယ်။ အရင်က အခုလောက် ဆီလက်ကျန်နဲ့ သုံး သောင်းဖို့ထည့်ရင် တိုင်ကီပြည့်ပြီ။ အခုတော့ တစ်မှတ်လိုနေသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် က ဆိုတဲ့ အတွေးခေါင်းထဲရောက်လာတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်က xxx ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်က xxxx
မဆီမဆိုင် “ မြို့အုပ်မင်း ကယ်မှ ထောင်လုံးလုံးကျတယ်” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကား ဘယ်သူကများ စပြောခဲ့သလဲလို့ စဉ်းစားမိတယ်။
2 thoughts on “မြို့အုပ်မင်း”
Thank you for talking about the daily struggles of the people.
“ဗဟိုဘဏ် ဒုဥက္ကဋ္ဌကြီးဟာ တိုကင်ရဖို့ဆိုတာ လူ့ပြည်က အပ်တစ်စင်းနဲ့ နတ်ပြည်က အပ်တစ်စင်း ထိဖို့ထက် ပိုခက်တဲ့ အကြောင်း…”
I am pretty sure he knows. But we both know that the New Light of Myanmar and MWD cannot report the realities on the ground. They have to stick to “ထန်းပင်ပေါ်က ကိန်းဂဏန်းများ” (my favourite quote from you). They have been doing that since the days of မဆလ (Ne Win), MWD since Than Swe’s era.
I again have to praise Pres. Thein Sein to allow press freedom even though his government might have been full of pro-military hard-liners, who were against his policies of liberalization.
You also haveavery thick skin to abusive comments on social media. It’s not easy to tolerate negative comments. It’sagift in fact. You are doingawonderful job.
I still would like to hear about stories from မဆလ era from your side asapersonal story. Because like I said before in my comments, people in the city had no idea what was going on in the “brown” (အညိုရောင်) and “black” (အမဲရောင်) areas. They haven’t heard of the word “ပေါ်တာဆွဲ”.
I remember havingaconversation with someone from Yangon in the late 90s inaforeign country. He didn’t believe that the army burned villages and committed rapes. Afterafew years of listening to interviews given by Myanmar military attachés on foreign media, he realized that the generals’ talking points were non-senses. One of the classic comments was “She is justahouse-wife” referring to Daw Aung San Suu Kyi at the time by one of the military men at the Myanmar embassy in the US while talking to US media. He might not realize how stupid he sounded on international media at that interview. After hearing so many interviews like those, that person from Yangon started to believe those war stories told by people who went through the ordeal.
These days, MAL is again making people inanormally peaceful area (အဖြူရောင် in မဆလ terms) realize what the people in the conflict zones had gone through by abusing and sexually harassing detainees from 2021 protests. Again, like I said, what soldiers on the ground are doing may not be reported to superiors. Asaresult, the superiors like high-ranking officers may or may not know. But it’s undeniable these things do happen based on my experience of soldiers in the brown and black areas: https://myanmar-now.org/mm/news/10110
PaingSoe Thu says: